China Iisokisi ze-SS06R zifudunyezwe kunye nabenzi | Ngomhla
Umbala: Mnyama + bomvu
Ukufunxa, ukuphefumla, ukomisa ngokukhawuleza, ukomeleza, sebenzisa imodyuli yokufudumeza umbane ecekeceke.
Izinto zokufudumeza ifayibha ngokudibeneyo, ezikhuselekileyo ngakumbi kwiinyawo zakho.
5.Umgangatho wokulawula ubushushu kumanqanaba amathathu ungalungelelanisa ubushushu obuhlukeneyo bokufudumeza ngokweemeko ezahlukeneyo. Ubomvu we-LED ubushushu obuphezulu, umhlophe kubushushu obuphakathi, buluhlaza kubushushu obuphantsi.
Isicelo: Ikhaya langaphakathi, kunye nemisebenzi yangaphandle: inkampu, ukuzingela, ukuloba umkhenkce, ukuhamba ngebhayisikile, ukukhwela ibhayisikile, ukuhamba ngesithuthuthu, ukubaleka, ukuskiya, ukukhwela ikhephu nayo nayiphi na eminye imidlalo yangaphandle.
Umgangatho ophezulu emva kweNkonzo yokuThengisa.
Egqithileyo Iikawusi shushu SS02B
Okulandelayo: I-5V yambatho eluhlaza okwesibhakabhaka